Kenya oo sheegtay inaysan ka noqon doonin qorshaha Darbiga ay uga dhiseyso Xuduuda – SBC
Kenya oo sheegtay inaysan ka noqon doonin qorshaha Darbiga ay uga dhiseyso Xuduuda
Posted by SBC Editor on July 30, 2015 Comments
Wasiirka arimaha gudaha dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday inaysan marnaba ka noqon doonin qorshaha Kenya ay darbi weyn uga dhiseyso xuduuda Somalia iyo Kenya udhaxeysa.
Joseph Nkaissery, oo Warbaahinta kula hadlay dalka Kenya wuxuu sheegay in Kenya xalka amniga dalkeeda ay u aragto kaliya inay darbigaasi dhisto si Kooxda Al Shabaab aysan uga soo gudbin deeganada xuduuda ah.
Wuxuu sheegay in sababta dhismaha darbiga ay tahay in laga hortago weerarrada ay Al-Shabaab ku soo qaado gudaha Kenya, isagoo intaas ku daray in marka nabad buuxda ay ka dhalato Soomaaliya ay dumin doonaan.
Dowladda Kenya ayuu sheegay in darbigaan ay dhiseyso ay kaga nabadgelayso weerarada Ururka Al Shabaab ay ku soo qaadaan dalkaasi, kolka ciidamo ka tirsan kuwa xuduuda la dhigo meelaha laga galaayo dalkaasi.
Madaxda Somalida ayaa horay u cadeeyeen fikirkooda ku saabsan Darbiga Kenya ay ka dhiseyso Xuduuda Somalia iyo Kenya, waxaana ay sheegtay Dowladda Somalia inaysan u arkin darbigaasi inuu baajinaayo weerarada Al Shabaab ee gudaha dalka Kenya.
Al Shabaab ayaa horay waxa ay u sheegeen inaysan joojin doonin weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka Kenya, ilaa ciidamadaasi Kenya ay ka baxaan dalka Somalia.
Weerarkii ugu dambeeyay Shabaab waxa ay ka geysteen Degmada Lamu duleedkeeda oo ka tirsan dalka Kenya, shalay waxaana ay ku dhaawaceen Askar ka tirsan Kenya.